Golli Naga Eegumsaa Dhimma Raashiyaa fi Yukireen Ilaalchisuun Wal Ga’ii Hatattmaa Geggeesse
Guraandhalaa 23, 2022
Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa, prezidaantiin Raashiyaa naannolee Yukireen adda ba’an lamaa kutaalee walabaa ta’uu isaanii erga labsanii boodaT wixata kaleessaa galgala wal ga’ii ariifachiisaa geggeessee jira.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadderri Yunaayitid Isteetis miseensota gola naga eegumsaaf akka himanitti, prezidaantiin Raashiyaa Vilaadmir Putin Donestsk fi Luhaansk akka kutaalee walabaatti beekkannaa kennuun isaanii, abbaa biyyummaa fi tokkummaa Yukireen irratti haleellaa hiika hin qabaanne geggeessuu bakka bu’a jedhan.
Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yunaayitid Isteetis Linda Toomaas Greenfiild akka jedhanitti, “Prezidaantiin Raashiyaa Vilaadmir Putin erga Sanaa qabee loltoota Raashiyaa naannoo sanatti akka bobbaasan beeksisaniiru. Naga eegdota ittiin jedhu. Kun waan hiika qabu miti. Sirriitti maal akka ta’an beekna.
Sana gochuu dhanias addunyaa duratti filannoo isaanii beeksisaniiru. Boodatti jechuu hin qabnu. Seenaan akka nutti himutti diinummaa akkasii irraa fuula deebifachuun gatii guddaa nama baasisa. Rashiyaan abbaa biyyummaa Yukireen irratti kan ooftu haleellaan ifaa ta’e kan sirnaa miti. Akka biyya miseensa tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa geggeessuu ti. Qajeelfama bu’uuraa kan seera sadarkaa addunyaa fi Chaarterii keennya cabsuu dha. Tarkaanfiin prezidaant Putiin kun Raashiyaan Yukireeniin weeraruuf hundee ta’uun isaa ifaa dha jedhan.
Tokkummaa mootummootattti ambaasaddderri Raashiyaa, Yunayitid Isteetisii fi michoonni isa agama dhiyaa sochii waraanaa tuqatu jechuun himatan. Vassilii Nebenziyaa kaleessa galgala gola naga eegumsaaf akka ibsanitti, prezidaant Putin Luhaansk fi Doneetsk-n akka kutaalee walabaatti beekkannaa kennuu dhaan humnootii naga eegdotaas kutaalee lamaanitti ni bobbaasu jedhan.
Tokkummaa mootummootatti bakka bu’aa Yukireen kan ta’an Sergiy Kyslytsya, akka Chaartricha keeyata 51 irra taa’ee jirutti, Yukireen mirga dhuunfaa fi walii kan ofii ishee irraa ittisuu qabdi. Nuti daandii nagaa fi dipilomaasummaa fi cicha qabna. Sana irras cimsinee dhaabanna. Danchii keenya irra jirra. Eenyuunuu maal iyyuu hin sodaanno. Eenyu iyyuu idaa nu irraa hin qabu. Eenyuuf iyyuu homaa hin kenninu. Shakkii tokko iyyuu hin qabu, sababiin isaas kun Guraandhala bara 2014 miti. Guraandhala bara 2022.
Raashiyaan waggoota saddeeti dura odola Yukireen Kireemiyaa weerarte.
Gama biraan, Yunaayitid Isteetis, gamtaan Awrooppaa fi Biriteen martinuu tarkaanfii qajeelfamaa fi seera sadarkaa addunyaa fi abbaa biyyummaa cabsu kanaaf Mooskoo irra uggura haaraa kan kaa’an ta’uu labsanii jiru. Abbaa biyyummaa Yukireen eegsisuuf murannoo qaban illee gola naga eegumsaaf mirkaneessaniiru.